Aragtida dhallinyarada markii ugu horraysay codadkooda ka dhiibanaya doorashada Kenya - BBC News Somali
Codadka dhallinyarada Kenya ayaa laga yaabaa in uu go'aamiyo cidda ay guushu ku raaci doonto doorashada guud ee Kenya ka dhacaysa toddobaadka soo socda, iyadoo ku dhawaad kala badh 19 milyan ee xaqa u leh in ay codeeyaan ay yihiin dad ay da'doodu ka hoosayso 35 sano. Haddaba maxay niyadda ku hayaan?
Weriyaha BBC Dickens Olewe ayaa la kulmay dhallinyaro da'duudu 22 sano tahay oo dhammaantood markii koobaad codkooda ka dhiibanaya magaalada Nairobi.
Markii koobaad ayaan codkayga dhiibanayaa sababtoo ah waxay ila tahay in ka qaybqaadashadaydu ay gacan ka gaysan doonto in isbadal uu ka dhaco Kenya.
"Si kastaba ha ahaatee shaki ayaa igaga jira diyaargarawga iyo kalsoonida lagu qabi karo guddiga doorashada. Marka walaacaas laga soo tagana ma rabo in aan iska fadhiisto oo aan ka baaqsado ka qaybqaadashada doorashadan muhiimka ah.
"Waxaan u arkaa in codkaygu uu kabayo kuwa doonaya in ay arkaan horusocod iyo is badal wanaag u horseeda dalkan.
"Qoyskayga oo dhan waxay codkooda ka dhiibanayaan magaalo kale taxadar ahaan haddii uu dhib ka dhaco Nairibi doorashada ka dib."
Wax yar ayaan ka aqaannaa siyaasadda Kenya iyo taaariikhda dalka laakiin wakhti ayaan galiyay in aan akhriyo waxaana dhihi karaa xog fiican ayaan hayaa. Waana arrin aan dadka kalana ku dhiirigaliyo waxaana rumaysanahay in ay taasi badalayso sida ay u arkaan siyaasadda.
"Qabiilka ayaa arrin wayn ka ah doorashadan, mana aha arrin damac kali ah meesha lagaga saari karo.
"Waxay ila tahay haddii dadka Kenyanka ah ay rabaan in ay u codeeyaan murashaxiinta ay isku qawmiyadda yihiin, markaas ha doortaan kuwooda ugu wanaagsan. Haddii aad fiiriso dadka hadda tartamayana ma aha hogaamiyeyaashii ugu wanaagsanaa ee bulshooyinkooda.
Qoyskaygu wuxuu u qaybsan yahay labada xisbi ee ugu tunka wayn Kenya oo kala ah NASA iyo Jubilee.
"Doodo wanaagsan oo ku saabsan cidda aan dooranayno ayaa na dhex maray. Laakiin mid kaste wuxuu ku dhagan yahay cidda uu taageersan yahay. Doodihii aan galnayna ma sababin in midkano uu badalo aragtidii uu qabay.
"Anigu waan go'aansaday ciddii aan dooran lahaa waana sugi la ahayn codaynta.
"Xaqiiqatan waan ka qaybqaatay doorashadii 2013kii, laakiin waxaan u arkaa in doorashadan ay tahay midaydii koobaad, sababtoo ah aabahay ayaa doorashadii hore ii yeeriyay cidda ay tahay in aan u codeeyo.
"Hadda wakhti ayaan galiyay in aan ogaado murashaxiinta iyo afkaartooda go'aanka aan qaadanayana wuxuu noqon doonaa mid xogogaalnimo ku salaysan.
"Waxaan u arkaa in qorsheyaasha ay labada xisbi soo gudbiyeenba ay yihiin kuwo horusocod ah, waxaanan rumaysanahay in midkii madaxweyne ku guulaystaba uu Kenya anfacayo haddii ay ka dhabeeyaan qorsheyaashii ay ka gadeen codbixiyeyaasha."
"Waan akhriyey bayaannada labada xisbi ee waaweyn, waxayna labadaba soo bandhigeen soo jeedimo macquul ah oo caawin kara dhallinyarada Kenya. Nasiib darro, waayo aragnimadii hore ayaa naga dhigaysa kuwo ka shakiya in ay ballan qaadyadaas ka soo baxayaan.
"Arrinta koobaad ee aan qabo waa fursado shaqo. Inkastoo aan iminka jaamacad dhigto, waxaana jeclahay in aan shaqo wakhti dhiman ah shaqaysto, laakin fursadahaas ma jiraan.
"Waxaan doonayaa in aan arko xukuumad abuurta jawi kala guur oo dhallinyarada u nabdoon, min iskuul ilaa iyo suuqa shaqada.
"Arrimaha kale sida amniga dadka Kenya ayaa hagi doona xulashadayda doorashadan.
"Waxaan dareemayaa in aan si fiican ugu diyaargaroobay doorashadan.
"Waxaan ahay wariye ka ahay deegaanka Kibera, waxaanan la kulmaa sheekooyin kala duwan oo dad ku saabsan, tanina waxay I siisay daaqad dhif ah oo aan ka arko noloshooda.
"Waxaan fahamsanahay sida siyaasadaha saxda ah ee sida hufan loo dhaqan galiyo ay si wanaagsan nolosha wax uga beddeli karaan.
"Waan ka dooday bayaannada labada xisbi ee waaweyn, faham wanaagsanna waan ka haystaa siyaasadahooda. Waxaa kale oo aan eegay waxa ay shaqsiyaadka murashaxiinta ku yaboohayaan, waxaanan dareemayaa in aan doorashadan sanayn doono xulasho ku salaysan warqab.
"Waxaan helay fursad aan ku codeeyo 2013, laakin ma codayn, sababtuna waa safka oo dheeraa, umana dulqaadan in aan sugo.
"Markan si wanaagan ayaan u abaabulanahay, waan soo dukaamaystay, waxaanan isu soo diiwaan galiyey in aan goob sod bixin kala codeeyo dhowr cod bixiye, sidaa awgeed laba arrimood ayaan hubaa: in aanan wakhti dheer saf ku jiri doonin iyo in aan codayn doono.